Nhau - Ungasarudza sei pepper grinder kubva kumabasa?
Kune misiyano yakawanda mumabasa eiyo grinder grinder, isu tinounza mashoma akajairwa mapoinzi ekuongorora maitiro ekusarudza kubva pamabasa.
1. Sarudzo yezvakakosha zvinhu
Kana uchitenga chigayo chemhiripiri, chakakoshesa kiyi chinhu inyaya yechipenga chechigadzirwa. Parizvino, zvakajairika zvinhu zvakakandwa simbi, simbi isina chinhu uye zvedongo.
Kana iwe uchida kuishandisa mukicheni inopisa uye ine hunyoro, simbi isina simbi isiri nyore kuita ngura isarudzo yakanaka, uye inogona zvakare kushandiswa kukuya dombo munyu. Nekudaro, simbi isina simbi yakapfava pane zvimwe simbi uye inowanzo pfeka mushure mekushandisa kwenguva refu.
Simbi yakakanda idare rakaomarara, uye yakatokura uye yakakura mhiripiri inogona kugadzikwa zvakavimbika uye nekukurumidza. Nekudaro, chakashata ndechekuti iri nyore kuita ngura, inofanirwa kuchengetedzwa kure nehunyoro, uye haigone kushandiswa kukuya munyu wedombo.
Ceramic chinhu chakasimba, pamusoro pekuti haisi kuita ngura, inogona zvakare kukuya munyu wedombo. Uye zvakare, hwema hwepepuru hunorasika zviri nyore nekuda kwekupisa kunogadzirwa panguva yekukuya, asi iyo ceramic zvinhu haigone kuburitsa kupisa kwekukonana, saka inogona kunyatso chengetedza hwema hwepakutanga hwepepuru.
2. Maitiro anogadzirisa ukobvu hwesimbi unoshanda
Kana iwe uchida kuwedzera kugona kweiyo grinder grinder, iwe ungashuve kutarisa kuti uone kana chigadzirwa chiine iro rekuwedzera basa rekugadzirisa iyo yekugaya ukobvu. Kana tichidya patafura, tinowanzo shandisa mhiripiri yakakangwa kuwedzera munuhwi; asi kana ikashandiswa mukubika, tingangoda mhodzi dzehiripiti yehurefu hwakafanana. Unogona kusarudza zvinoenderana nezvaunoda iwe pachako.
3. Iyo yakasarudzika, isina-ngura maitiro iri nyore kuchenesa
Iwo maviri-ruoko anomonyanisa mhando pepper grinder inogona kubviswa nyore nyore uye kucheneswa nekuda kwayo yakapusa mamiriro mamiriro, asi mazhinji mamwe marudzi ezvigadzirwa haakwanise kubviswa, izvo zvinowedzera zvakanyanya kuoma kwekuchenesa uye kugadzirisa. Kunyangwe iri modhi inogona kubviswa, kuitira kudzivirira unyoro hunosara mushure mekuchenesa nekukonzera ngura, zvinokurudzirwa kuti ushandise jira rakaoma kuupukuta pane kugeza nemvura yakachena.
Nekudaro, kubika kunokonzeresa kunokonzera hutsi hwemafuta uye mafuta emafuta pane pepper grinder, uye zvinonetsa kuichenesa zvakakwana nekungopukuta chete. Panguva ino, zvinokurudzirwa kuti utenge chimiro chakagadzirwa negirazi kana acrylic zvinhu. Pamusoro pezvo, zvedongo zvedongo hazvina kudzikisira kuita ngura kupfuura simbi isina chinhu. Zvinhu izvi zvinogona kucheneswa zviri nyore.
4. Manyorerwo anogona kuona kugona kwakasara pakatarisa akakodzera kune vanhu vanoishandisa kazhinji
Paunenge uchibika, unofanirwa kunge wakasangana neruzivo rwekunhonga bhodhoro re condiment, uchingoona kuti bhodhoro ratove risina chinhu. Hazvina kunaka here? Kunyanya kune madhishi ayo anoda kukurumidza kutsvaira, kana uchifanira kumira kuti uwedzere zvinwiwa panguva yekubika, zvinogona kukanganisa iko kunhuvira kwemidziyo yakapera. Naizvozvo, kunyangwe hazvo mhiripiri yemuti inotaridzika kunge yechinyakare uye inodakadza, kana ukaishandisa kakawanda, zvinokurudzirwa kutenga zvigadzirwa zvakagadzirwa nezvinhu zvakajeka zvakaita segirazi kana acrylic, kuti ugone kuona chinosara chinhanho!
Mhando dzakasiyana dzeanokuya mhiripiri dzine zvayakanakira nezvayakaipira. Zvinokurudzirwa kuti iwe utarise kune akanangana akagovaniswa nhasi usati watenga, uye sarudza iwo akakodzera maitiro maererano nezvinodiwa zvako wega!